မမနှဲရဲ့ ဒုက္ခ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မမနှဲရဲ့ ဒုက္ခ
Posted by ဆူး on Oct 17, 2010 in Arts & Humanities, Drama, Essays.., History, Short Story | 29 comments
မြန်မာ တွေ နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေ ရှိနေကြတာတွေတော့ သိကြမှာပါ။ ရိုးရာ အစဉ် အဆက် ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ကြောင့် ကိုးကွယ်နေကြပါတယ်။ အဘွားအိမ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟာသလေး တခုပါ။ အဘွားက ဗမာစစ်စစ် မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှုတွေ ရှိနေတယ် အဲဒီထဲမှာ မနှဲလေး လည်းပါသပေါ့.. မနှဲလေးက ကလေးနတ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပေါ့။ မနှဲလေး ကိုးကွယ်တဲ့ အိမ်ကို ဧည့်သည်အဖြစ် ယောကျားလေး ငယ်ငယ်လေး တွေ အိမ်ကိုလာကြရင် မနှဲလေးက အသည်းယားလို့ ဆိုလား ဘာလား လိုက်ဆိတ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘယ်ကို ဆိတ်လဲတော့ မသိဘူး ကလေး ဆိုတာ ငိုတာဘဲ တတ်တဲ့ အရွယ်လေးတွေ ဆိုတော့.. ဘယ်နား နာတယ် မပြောဘူး။ ဆိတ်တယ်လို့ ပြောတာက ကလေးငယ် အထီးလေးတွေ ဆို အကြောင်းမရှိ ထထ ငိုတတ်တာပါ။ အဲဒီလို မငိုရလေအောင် (မဆိတ်အောင်) မနှဲလေးကို ဘဲဥ ပြုတ်ဆက်ရပါတယ်။ အိမ်ကို ကလေးလာတယ် ဆိုတိုင်း မနှဲလေးကို ဘဲဥ ဆက်ရတာဘဲ.. တခါမှာတော့ အိမ်ကို လာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ၀င်ပူးပြီး စကားပြောရှာတယ်..
`ရွှေမေမေကြီးရယ် ရွှေမမလေးက နှဲလေးကို ဘဲဥ အပူကြိးတွေ ပေးတော့ လက်ကလေးတွေကို ပူနေတာဘဲ´
အဲဒါနဲ့ အဘွားက အလန့်တကြား နဲ့
ဟဲ့ ညီး ဘယ်လို ဘဲဥ ဆက်လဲ
ဘဲဥပြုတ်ပြီး ဆယ်ပြိး ဒီတိုင်း တင်ပေးလိုက်တာဘဲ။ အလုပ်တွေ များရတဲ့ အထဲ ဘဲဥ က ထပ်လုပ်နေရတော့ ဒီတိုင်းဘဲ ရေမစိမ်ဘဲ တင်လိုက်တယ်
အဲဒီလိုနဲ့ မှတ်မှတ်သားသား ဖြစ်ရပ်ကလေး ဖြစ်နေတာပေါ့..
ဒါနဲ့ ဒီလို ရေးလို့ နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေ အယူသည်းမှုတွေ လူတွေ ကြားထဲမှာတော့ စွဲမြဲ စေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ နတ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ ပြိတ္တာတွေက ရှိတော့ရှိတယ်။ သူတို့ကို ကြောက်စရာလည်း မလိုသလို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ပြီး သရဏဂုံ ညှိုးနွမ်းစရာ မလိုပါဘူး။ သူတို့ကို စေတနာ ထားပြိး မေတ္တာပို့ယုံတင် သူတို့ အတွက် များစွာ အကျိုးထူးပါတယ်။ တခန်းတနား ကိုးကွယ်လို့ ဘာမှတော့ အထူး စပါယ်ရှယ် ကောင်းကျိုး ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူး အားလုံးက ကံ ကံ ၏ အကျိုးဇြစ်နေတဲ့ အတွက် ဘယ်သူ မပြု မိမိမှုဘဲ ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံ ကိုယ်ထံ ပြန်လာတတ်တာပါဘဲ။ နတ်ကိုင်တယ် ဘာညာဆိုတာလည်း ကံမကောင်းလို့ ဖြစ်နေတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ငါလုပ်တာ ငါကို ဘာပြောလို့ ညာပြောလို့ ဆိုပြိး ကြားထဲက ဆရာဝင်လုပ်နေတာပါ။
နောက်မှဘဲ စိတ်ကူးတည့်ရင် တည့်သလို ထပ်ပြိး ရေးလိုက်ပါတော့မယ်။
ဩော် ..ဖြစ်ရလေ မနှဲလေရယ် တခိုးရှိရင် ဘဲဥပူတာဘဲ အေးအောင်လုပ်စား ပေါ့ လက်ပူခံရတယ်လို့ လူကြားမကောင်းပါဘူး
နတ်ပြိတ္တာတွေခဗျာ စားလဲစားချင် စားလုိ့လဲမရလို့ အငွေ့ရှူပြီး အပူလောင်သွားတာပဲနေလိမ့်မယ် ..
ကျွန်နော်တှိုဆီမှာ ဘဲဥကရှားလို့ ကြက်ဥကို ဟင်းချက်စားကြတယ်။ ကြာတော့စားတဲ့သူတွေက ပြောရင်ဘဲဥဟင်းလို့ပဲ ပြောကြတော့တယ်။ မနှဲလေးသာ ယူအက်စ်လာရင် ကြက်ဥပြုတ်ပဲ စားရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်။
ဘကြီး ကြောင် က မနှဲလေးကို ယူအက်စ် ဖိတ်ချင်လို့လား.. စပွန်ဆာ လုပ်ပြီး ပို့ပေးမယ်.. ဒီမှာ ရှုပ်နေလို့.. ဟီးဟီး..
ကင်ချိဘာလို့စားလဲဆိုလို့ … ကျနော်သိသမျှလေး တခုလောက်တင်ပြပါရစေ … ကျနော်အဲဒီမှာကြာကြာလေးနေဘူးတယ်ဗျ ..ဒါပေမဲ့
ကင်ချိမကြိုက်ဘူး … မစားဘူးပေါ့ဗျာ …သူတို့ထမင်းနဲ့တခြားဟင်းတွေကိုဘဲ စားတာ …ကြာလာတော့ ၀မ်းမသွားဘဲ မျက်စေ့တွေ
အရမ်းမှုံလာတယ် …ကျနော်လန့်သွားတာပေါ့ … ဆေးရုံပြေးရရင်လဲ ကုန်ကျစားရိတ်ကမသေးဘူးလေ …
နောက်မှ ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ ..သူတို့ထမင်းကအတော်စီးတယ်လေ …ချဉ်ဖတ်မစားရင်ဝမ်းမသွားဘူး …. အဲဒါလဲတချက်ပါမှာပေါ့။
ဦးလေး ဖတ်ရေ.. ဆာဗာ ပြသနာ နဲနဲ ရှိလို့ နဲ့ တူတယ် ကင်ချီ ပိုစ် အသစ်တင်တာ မနှဲလေး အောက်ရောက်သွားတယ်.. ဦးလေးဖတ် ရေးထားတဲ့ ကွန်မန့် နေရာလွဲနေသလို ဖြစ်နေပြီ.. ကင်ချီ ပိုစ် အသစ်တင်လို့ရတာနဲ့ ပြန်တင်လိုက်ပါမယ်။ ပြန်ထပ်ရေးပေးနော်။
ဒါဆို..ဆူးရေ မမနှဲကို ဘဲဥအစား ကင်မ်ချီ ပြောင်းတင်ကြည့်ပါလား ဒီခေတ်က ကိုရီးယားခေတ်ဆိုတော့ သူတို့လည်း ကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာနော်.. ပြောလို့မရဘူး
ဆာဗာပြဿနာကြောင့် မဟုတ်ပါ ..မမနှဲကျနော့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်တာပါ …သဘောကျတော်မူတယ်နဲ့တူတယ်။
ဦးလေးဖတ်ကို မမနှဲ သဘောကျတော်မူပြီး ဆွဲခေါ်တာနဲ့ ဘဲဥတွေ စားပြီး ၀မ်းချုပ်သွားတာဘဲ ဖြစ်ရမယ်။
နတ်ဆိုတာ ..အင်တာနက်ကနေ..အင်တာနတ်အကူအညီနဲ့ ..နေရာရွေ့ လို့ရတယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။ အဲဒါ.. ကိစ်စချောအောင် ..ဖရဲသီးကပ်လိုက်မယ်…ဖြစ်မလား..။?
တူ့ လက်ဝါး သေးသေးနဲ့ ဘဲဥ လောက်ဘဲ ကိုင်နိုင်တာ.. ဖရဲသီး မနိုင်လို့ လွတ်ချရင်.. ကိစ္စတွေ များရချည်သေးရဲ့..
နတ်က ဘယ်ကို ကိုင်မှာ မို့ ကြောက်တာတုန်း.. ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်လို့ မရတဲ့ လေ လိုဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်မလဲ.. ဟဲဟဲ.. မနှဲလေးက မကိုင်ဘူး.. ဆိတ်ဘဲ ဆိတ်တာ.. ကျားပေါက်လေးတွေကို.. ချစ်လို့ အသည်းယားလို့..
အယုံအကြည်မရှိကိုးကွယ်ခြင်းမရှိသလို …. ရှေးအယူတွေကိုလည်း မဆန့်ကျင်ပါဘူး ။
လူကြီးတွေကတော့ စုံနေတာပဲ မျိုးစုံလုပ်ကြတယ် ။ ကိုယ်ကတော့ နတ်ကွန်းရှေ့ဖြတ်သွားရင်တောင်လှည့်မကြည့်ဘူး ။
etone ပြောသလိုဘဲ ဆူးကတော့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ် အဖြစ်နေထိုင် ကျင့်ကြံပါတယ်။ ရှေးအယူ အဆတိုင်းကိုလည်း ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ်နဲ့ သေချာ စဉ်းစား ချင့်ချိန်ပြီး ကောင်းတာကို လက်ခံတယ် မကောင်းတာ ဆိုလုံးဝ ပါယ်ပါတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်မှုကို ဆန့်ကျင်တယ်ပါတယ်။ သို့သော် မုန်းတီးပြီး ရန်လို နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အခါ အားလျှော်စွာ သူတို့ကို မေတ္တာပို့ပါတယ်။ ဒါလည်း ကောင်းတဲ့ အလေ့ အကျင့်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
နတ် ဆိုတာလည်း သတ္တ၀ါထဲမှာ ပါတယ်လေ.. နတ်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ လူတွေကို ကိုင်တယ် (အနိုင်ယူ) ဆိုတာက မျက်စိထဲမြင်အောင် လူတွေ အနေနဲ့ ပြောရရင်.. အားကြီးတဲ့ လူ က အားနည်းတဲ့ လူကို ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း လုပ်တဲ့ သဘောမျိုးပါ။
အမှန်တော့ ခံရတဲ့ လူ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်ဘက်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သီလ သမာဓိ မပြည့်စုံတဲ့ လူဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ပါ။ သီလ သမာဓိ ပြည့်စုံတဲ့ လူမှန်ရင် ဘယ်လို နတ်မျိုးကမှ ကိုင်တယ် ဖမ်းစားတယ် အနိုင်ကျင့်တယ် ဆိုပြီး လုပ်လို့ မရပါဘူး။ သီလနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လူကို သကြားမင်းက မနက်တိုင်း ဦး သုံး ကြိမ် ချပြီး ရှိခိုးတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။ လူတွေ နဲ့ အနီးကပ်မှာ နေတဲ့ နတ်ဆိုတာ ပြိတ္တာ အဆင့်ဘဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတိတ် ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် အရှိန်အား ရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့မှာ တန်ခိုး အနည်းငယ်ရပြီး လူတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ပြီး လူတွေစီက ကပ်စားနေကြတာပေါ့.. ဥပမာ ပြောရရင်တော့ သူတို့က စွမ်းအားရှင်တွေပေါ့ကွယ်.. ရရင်ရ မရရင်ချ.. အဲမှားပြီ.. ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ပေးကမ်းမလား.. မပေးရင် နင်တို့အသေဘဲ.. အဲလိုမျိုးပေါ့.. သကြားဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ထက်မြင့်တဲ့ ဘုံမှာ နေတဲ့ နတ်စစ်စစ်ပါ။ ပြီတ္တာ နတ်ယောင်ဆောင် မဟုတ်ပါဘူး။ သကြားကဲ့သို့ နတ်စင်စစ်တွေကတောင် သီလနဲ့ပြည့်စုံသူကို မနက်တိုင်း ဦးချ ရှိခိုး ဂါရ၀ ပြုတယ် ဆိုမှတော့.. နတ် အဆင့်မမှီဘဲ နတ်ပါ အော်နေတဲ့ ပြိတ္တာတွေ ဘာခံနိုင်ဦးမလဲကွယ်.. တနည်းပြောရရင် ချုပ်ချုပ်ကြီးတောင် ဂါရပြုမှတော့.. စွမ်းအားရှင်တွေ ဖိနှောင့်နဲ့ ပေါက်ရင်တောင် အသံမထွက်ရဲဘူးပေါ့ကွယ်။
အဓိက ပြောချင်တာကတော့ သီလနဲ့ ပြည့်စုံအောင်နေပါ။
သမာဓီနဲ့ ဘာဝနာ တရားများ ပွားများ အားထုတ်ပါ။
သိပ်မှန်တာပေါ့ … လူတိုင်း သီလရှိရင် ဘယ်လောက် ကျက်သရေရှိလိုက်မလဲ …
အုန်းစိမ်း ငှက်ပျောစိမ်းတင်တာက ပုဂံခေတ်က စခဲ့တာ .. အနော်ရထာမင်းလို့ထင်တာပဲ .. အရင်တုန်းက စားကောင်းသောက်ဖွယ် သူများအသက်တွေပါတင်ကြတာနဲ့ ဘုရင်က မင်းမိန့်ကိုသုံးပြီး အဲဒီတုန်းက ဈေးပေါတဲ့ အုန်းစိမ်း ငှက်ပျောစိမ်းသာ တင်ရမယ်ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာလို့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ် …
ဟိုတစ်နေ့က ကိုကြီးကျော်ဆီက ကံစမ်းမဲပါတဲ့ မေးခွန်းလေး မေးလ်ထဲကိုရောက်လာပါတယ်။
အခုတစ်လောလူတွေက ဒီဂရီမမှန်တဲ့ အသီးနာမည်တပ်ထားတဲ့ ၀ိုင်တွေကိုလာလာတင်တာ မသိဘဲ သောက်လိုက်တော့ ရေချိန်လွန်သွားပါသတဲ့။
အမြည်းဆက်တဲ့ ကြက်ကြော်က လဲ CP ကြက်တွေဖြစ်နေတော့ မြန်မာကြက်သားလောက် မချိုလို့ စိတ်တိုပြီးမော့သောက်လိုက်တာ အမူးလွန်သွားလို့ အပြန်မှာ နန်းမှားဝင်လို့ ပိုင်နက်ကျုးလွန်မူ့နဲ့ နတ်မင်းကြီးများရုံးမှာ အမူ့ဆိုင်နေရတယ်လို့ မေးလ်လာထားပါတယ်။
မေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ ကိုကြီးကျော် ဘယ်နန်းကိုမှားဝင်ပါသလဲတဲ့ဗျိုး။
အမေဂျမ်း နန်း များလား..
လေးပေါက် ပြောတာ နောက်တခု ထပ်စဉ်းစား မိပြန်ပြီ.. နန်းမဟုတ်ဘဲ လမ်းမှား သွားတာ သဂြိုင်းကုန်း ဖြစ်နေပြီး မဖဲဝါနဲ့တွေ့သွားတာများလား..
ဪ..မနှဲလေးဆီမှာ လူလာစီနေပါရောလား တယ်လဲတန်ခိုးကြီးပါ့နော်
ချာတူးလန်.. ဘဲဥပြုတ်ပါလို့လား.. မပါရင် မမနှဲ ဆိတ်လိုက်မှာနော်..
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ခလေးဘ၀မှာ စ နောက် ခဲ့တဲ့ စကားလေးတလုံး ရှိတယ်။
ဂတ်ကို မှ တိုင်စာပဲ ပို့လို့ ရမယ်.. သူတိုင်ပုံ တိုင်နည်းကလည်း ရီရတယ်။
စကားပြောတာ ရွှေချင်းကို ထပ်နေတာပဲ။
ကြားဖူးတာကို ပြောပြမယ်နော် ။ ရွှေမမနှဲလေးကို ရွှေကိုကိုတို့ ရွှေမမတို့က ဒီရွှေဖင်ဖင်ဥလေးနှစ်လုံးကိုဆက်ပါတယ်လို့ တိုင်တယ်ကြတယ်။
အမလေး ဒီ ကျားမဟုတ် မ မဟုတ် ဟိုလိုလို ဒီလိုလို က ဒီမှာ လာပီးညစ်ပတ်နေသေးတယ်…
maythakhin ညည်းနော် ညည်း….